Antso amin’ny fifampidinihana : milaza ho vonona ny filoha, nefa tsy hita izay eo… (NewsMada) | AEMW
Antso amin’ny fifampidinihana : milaza ho vonona ny filoha, nefa tsy hita izay eo… (NewsMada)
Ahoana ihany ny hamahana izao olana eto amin’ny firenena izao? Milaza ho vonona amin’ny fifampidinihana ny filohan’ny Repoblika, nefa tsy hita izay eo…
« Afa-mifampiresaka isika. Manokatra varavarana foana ange aho amin’ny fifampiresahana. Afa-mifampiresaka ny vahoaka malagasy, ny mpanao politika, fa tsy ny fidinana an-dalambe no vahaolana amin’ity firenena ity. Aoka mba handray lesona isika. »
Tenin’ny filoha Rajaonarimampianina teny Ivato, ny faran’ny herinandro teo, io, manoloana fitakiana fifampidinihana hamahana ny olana amin’izao fotoana izao. Efa naneho ny heviny ny vahoaka, tamin’ny faran’ny taona 2013. Efa nisafidy ny mpitondra azy izy, na filoham-pirenena, na solombavambahoaka.
Amin’ny alalan’ny fifidianana no ametrahana ny tena demokrasia, ny filaminan’ny firenena, ny fampandrosoana ny firenena. « Nahoana no tsy miandry ny fifidianana manaraka ny tena hiarahana mifaninana ao anatina fifidianana indray? » hoy izy.
Atao amin’ny asa ny fanamby
Maninona no tsy mahandry, fa hoe halefa mialoha ny fifidianana, harodana io, hangatahana ny filoha mba hiala? Ny vahoaka ve no nametraka azy; ny ery amin’ny ilany, milaza hoe mialà fa maninona? « Mba hangataka amin’ny mpanao politika sasany koa aho hoe mba jereo koa ny andraikitrareo », hoy ihany izy. Mila ialana ny toy izany, satria tsy mampandroso ny firenena.
Izay lazaina hoe fanonganam-panjakana sy Tetezamita ve no hampandrosoana ity firenena ity? « Mbola hampiana firy taona indray ny vahoaka malagasy ao anatin’ny fahantrana efa mahazo azy? » Andao hanao fanamby amin’ny alalan’ny asa ihany isika ho fampandrosoana ny firenena. Mitsangana isika izao amin’ny fampandrosoana ny firenena.
Mety sy mandeha avokoa ny ataon’ny mpitondra
Mety sy mandeha avokoa ny ataon’ny mpitondra? Eny, na ny vava sy ny teny atao aza. Izany no vonona hifampidinika? Raha misy mangataka fihaonana: tena raisina sa fialana fotsiny ny hoe efa niteny izay? Mba mahay maka lesona koa ve fa haloam-bahoaka ny mpitondra mivadika amin’izay fifanarahana sy fanamby tamin’ny fifidianana? Voafidim-bahoaka, janoary 1972, ohatra, ny filoha Tsiranana, notakiana ny fialany ny mey 1972. Lany ny filoha Ratsiraka, marsa 1989, notakiana ny fialany, mey 1991.
← Antoko Arema : ho sahirana ny mpitondra raha tsy mihaino… (NewsMada)
Pasitera Mailhol : tsy ilaina ny valifaty politika… (NewsMada) →